စီးဆင်းလေဦးမှာလား ဧရာဝတီ (သတင်းဝေဖန်ချက်)
ရာဝတီမြစ်ဆုံကို ဆည်ဖို့တော့မည်။ မေခ၊ မေလိခတို့ ဆုံစည်းရာမှ ဧရာဝတီမြစ်ဟု စတင်ပေါ်ပေါက်လာရသည့် မြစ်ဖျား ပိုင်းကို ဆည်ဖို့တော့မည် ဖြစ်သည်။ ဆည်မှ ဧရာမဆည်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ ဆည်ကြီးများတည်ဆောက်ခဲ့၍ နိုင်ငံအများ တွင် ဆိုးကျိုးနစ်နာမှုများ ကြုံခဲ့ကြရသလို ဧရာမဆည်ကြီးများ တည်ဆောက်မည်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာတလွှားတွင် ပွက်ပွက်ညံ ကန့်ကွက်သံများ ဆူညံသွားတတ်ကြသည်။
အခုလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသက်သွေးကြောဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်နိုင်သည့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ဆည်တုတ်မည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စကို စိုးရိမ်ပူပန်စွာ အရေးတယူ လေ့လာတင်ပြလာကြသည့် ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်ကို မိမိ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့၏ သုတေသနပြုချက်များကလည်း ပြည့်စုံပီပြင်စွာ စုဆောင်းတင်ပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အန္တရာယ်ကြားမှ စွန့်စား၍ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများ ပြုခဲ့ကြသည်မှာ အလွန်ချီးကျူးထိုက်သော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်း၍ အမှန်တကယ် သံချောင်းခေါက်တပ်လှန့်ရမည့် ကိစ္စလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ဆည်သာမက မေခမြစ်ပေါ်တွင် နောက်ထပ်ဆည် ၇-ခု ထပ်တည်ဆောက်ရန် စစ်အစိုးရက လျာထားချက်များလည်း ရှိနေပါသေးသည်။
သို့သော်လည်း ဤအစီရင်ခံစာအကြောင်း သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြသူများက ဤသို့ စိုးရိမ်ဖွယ်အကြောင်းကို ခြုံငုံဖော်ပြ ခဲ့သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ သတင်းခေါင်းစဉ်များကို ကြည့်၍ မိမိအလွန်အားမလို အားမရ ဖြစ်လာပါသည်။ ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်) က ဤသတင်းကို ဖော်ပြသည် ကြားရပါသည်။ ဧရာဝတီအွန်လိုင်းတွင် မတွေ့ရသေးပါ။ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အွန်လိုင်း မြန်မာစာမျက်နှာက “မြစ်ဆုံရေကာကြောင့် ရွာ ၅ဝ ခန့် ရေမြုပ်မည်ဟု ကချင်အဖွဲ့က ပြောဆို” ဟုသာ သတင်း ခေါင်းစီး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ခေတ်ပြိုင်သတင်းစာ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာကလည်း “KDNG မှ စံချိန်မှီ စီမံကိန်းများဖြစ်စေရန် တရုတ်အားတိုက်တွန်း” ဟု သာ သတင်းခေါင်းစီးရေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဤဖော်ပြချက်များကို မိမိမကျေနပ်နိုင်၍ ဤ ဆောင်းပါး ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အချာနေရာများကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းသွားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှလုံးသည်းပွတ်ဟု ပင် ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်က မြန်မာလူထုများအတွက် သောက်သုံးရေ ပေးသလို၊ ဆန်စပါးများ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ရေ၊ နုံးတင်မြေနု၊ သားငါး တောကောင်များ ကျက်စားရာ လွင်ပြင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လျှင် ဧရာဝတီ နှင့် ကင်းကွာ၍ မရပါ။ ၁၁-ရာစု ပုဂံအင်ပိုင်ယာမှသည်၊ မြင်စိုင်း၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ ကုန်းဘောင် အဆက်ဆက်သော မြန်မာ့ ထီးနန်း အုပ်ချုပ်သူများ လူထုများ မှီခိုရှင်သန်ခဲ့ကြသည်မှာ ဤမြစ်ကြီးဧရာဝတီပင် ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းဆိုရလျှင် ဧရာဝတီသည် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့သော လွင်ပြင်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာများက ဤမြေကို ကာကွယ်ခဲ့ကြပြီး၊ ဤမြေတွင် ကြီးထွားခဲ့ကြပါသည်။ ဤမြစ်နှင့် ဤမြေကို ခုံမင်တပ်မက်ခဲ့ကြပါသည်။ ရှေးအဆိုတော်များ သာမက ခေတ်အဆိုတော်များဖြစ်သည့် ခင်ဝမ်း၏ ဧရာဝတီ၊ ထူးအိမ်သင်၏ ဧရာဝတီ၊ စသဖြင့် ဧရာဝတီသည် အနုပညာ ရှင် တို့၏ အိပ်မက်များကို ဖွားမြင်စေရာလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းက (၄၁၃, ၆၇၄) စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ စုစုပေါင်းအကျယ်အ၀န်း၏ (၆၁) % ကို လွှမ်းခြုံထားပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်သည် မြစ်ကြောင်းအလျားက (၂, ၁၇၀) ကီလိုမီတာနီးပါး ရှည်လျားပြီး၊ တိုင်းပြည်၏ အရေးအကြီးဆုံး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ရေကြောင်းလမ်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် လူဦးရေ (၃) သန်းကျော် မှီတင်းနေထိုင်ရာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအထွက်၏ (၆၀%) ကို ဤဒေသကထုတ်လုပ် ဖြည့်ဆည်း ပေးနေပါသည်။
ထိုမျှမက ဧရာဝတီမြစ်သည် ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ် (UN Environment Programme) နှင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု စောင့်ကြည့်ရေးဌာန (World Conservation Monitoring Center) တို့က ၎င်း၏ဇီဝသတ္တ စုံလင်ကြွယ်ဝမှုကြောင့် ဦးစားပေး ထိန်းသိမ်းထားအပ်သည့် မြစ် (၃၀) စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော မြစ်ကြီးတစင်း လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်တွင် ငါးမျိုးစိတ် (၇၉) မျိုး ရှိနေပြီး ရှားပါးသည့် ဧရာဝတီလင်းပိုင်ငါးကြီးများလည်း အပါ အ၀င် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းလျှောက်၌ ငှက်များအတွက် စားကျက်ဘေးမဲ့မြေ ၄-ခု လည်း တည်ရှိနေပါ သေးသည်။
ယခုကိစ္စက ဤမြစ်ကို ဆည်တုတ်မည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။
စစ်အစိုးသည် ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်ရှိ ပင်မဆည်ကြီးအပြင်၊ မြစ်ဆုံမြောက်ဘက်ရှိ အင်မိုင်ခခေါ် (မေခ) မြစ်ပေါ်၌လည်း နောက်ထပ်ဆည် (၇) ခု တည်ဆောက်ရန် လျာထားသော စီမံကိန်းများ ရှိနေပါသေးသည်။ ဧရာဝတီမြစ် စီးဆင်းနိုင်ပါ ဦးတော့မည်လော။
စစ်အစိုးရ သက်ဆိုးရှည်စေမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
ဤဆည်တည်ဆောက်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် စစ်အစိုးရ ၀င်ငွေရကာ သက်ဆိုးရှည်စေပါဦးမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏကို အတိအကျမသိရသော်လည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၆ ဘီလီယံ ခန့်ရှိမည်ဟု KDNG က ခန့်မှန်းတွက်ချက် ဖော်ပြပါသည်။ ထို့အပြင် ဤဆည်များတည်ဆောက်ပြီးစီးပါက လျှပ်စစ်ရောင်းချငွေဖြင့် စစ်အစိုးရက တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း (၅၀၀) ခန့် နှစ်စဉ် ငွေဝင်လမ်းဖြောင့်နေပါဦးမည်။
(၂၀၀၇) ခုနှစ်၊ မေလ အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ဆောင်းပါးတပုဒ်က အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ၊ ရေအားလျပ်စစ် အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ လျပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း (China Power Investment Corporation--CPI) တို့သည် ရေအား လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း စီမံချက် (၇) ခု (ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ၌ ၃,၆၀၀- မီဂါဝပ် စီမံချက်၊ ချီဗွေ၌ ၂,၀၀၀-မီဂါဝပ် စီမံချက်၊ ပါရှီး၌ ၁,၆၀၀-မီဂါဝပ် စီမံချက်၊ လာကင်၌ ၁,၄၀၀-မီဂါဝပ် စီမံချက်၊ ဖီဇော၌ ၁,၅၀၀-မီဂါဝပ် စီမံချက်၊ ခေါင်ဂလန်ဖူ၌ ၁,၇၀၀-မီဂါဝပ် စီမံချက်၊ လိုင်ဇာ၌ ၁,၅၆၀-မီဂါဝပ်စီမံချက်) ကို ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဆည်အားလုံး တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပါက စုစုပေါင်း မီဂါဝပ် (၁၃,၃၆၀) ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါ သည်။ ဤစီမံချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အကြီးဆုံး ရေအားလျပ်စစ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်၏ အကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် လုပ်ငန်းစီမံချက်ဖြစ်သော ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ (၇,၁၀၀) မီဂါဝပ်ထုတ်ပေးနိုင်သည့် တာဆန်းဆည်၏ အင်အား ထက်သာလွန် နေပါသည်။
ဤဆည်များမှ ထွက်လာသော ရေအားလျှပ်စစ်များက မြန်မာပြည်သူလူထု ခံစားရဖွယ် မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပညာရှင်တဦးလေ့လာချက်အရ ထိုဆည်များမှ လျှပ်စစ်ကို သယ်ပို့ပေးမည့် ကောင်းကင်ကြိုးတန်းစနစ် မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤလျှပ်စစ်များက တရုတ်နိုင်ငံကို ရောင်းစားရန်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စီမံချက်တွင် အဓိက ပါဝင်လုပ်ဆောင်မည့်သူ တဦးဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) ၏ အဆိုအရ၊ ယူနန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကွန်ရက်ကုမ္ပဏီ (Yunnan Power Grid Company) က မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လွှတ်ပေးမည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများကို ယူနန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကွန်ရက်စနစ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့လွှတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ “အနောက်မှအရှေ့သို့ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပို့လွှတ်ပေးရေးအစီအစဉ်” (West to East Power Transmission Policy) အရ လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆည်များတည်ဆောက်မှုက ဤစီမံချက်၏ အစိတ်အပိုင်း သာ ဖြစ်ပါသည်။
The Voice ဂျာနယ်၏ သတင်းတခုအရ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြီးများကြောင့် တရုပ်နိုင်ငံက FDI ခေါ် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် နိုင်ငံများအနက် ဆဌမနေရာယူလာကြောင်း ဖတ်ရပါသည်။ (၂၀၀၅-၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တရုပ်နိုင်ငံက အဆင့် ၉ သာရှိခဲ့သော်လည်း၊ ရွှေလီရေအားလျှပ်စစ်တွင် တရုပ်နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၂၈၁ သန်း ထပ်မံမြှုပ်နှံခဲ့ သောကြောင့် (၂၀၀၆-၂၀၀၇) တွင် အဆင့် ၆ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ယခု ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စများ မလာသေးပါ။
(၂၀၀၇) ခု၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ စာရင်းများအရ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းက မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် (၄၃. ၈%) အထိ တက်လာပြီး၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့က ၂၀% သာ ရှိနေပါသည်ဟု ၎င်းဂျာနယ်တွင်ပင် ဖတ်ခဲ့ရပါသည်။
ဖော်ပြခဲ့သည့် ပမာဏ အတိုင်းအတာကို တွက်ကြည့်ပါ။
သစ်တောများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ အကြီးအကျယ်ပျက်စီးရပါလိမ့်မည်။ ဆည်တည်ဆောက်သည့် ကန်ထိရိုက်များ အတွက် ငွေတွင်းကြီးဖြစ်သော်လည်း ဒေသနေပြည်သူအများ အိုးအိမ်စွန့်ခွါ ပြောင်းရွှေ့ကြရပါလိမ့်မည်။ စစ်တပ်များ လုံခြုံရေးအတွက် ပိုမိုတိုးမြှင့်ချထားလာသောကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ မုဒိမ်းမှုများ၊ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေ မှု၊ အဓမ္မရွှေ့ပြောင်းစေမှုများ ပို၍ကြုံလာရဖွယ် ရှိနေပါသည်။ ဒေသနေလူများလည်း ဒေသများရေလွှမ်းသောကြောင့် နေထိုင်ရေး၊ သွားလာရေးခက်ခဲကြရမည်။ ရွှေတူးခြင်း၊ အမဲလိုက်၊ ငါးဖမ်းခြင်း စသည့် သက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ဆုံးရှုံးရခြိမ့်မည်။ မိသားစု အသိုက်အမြုံများ ပြိုကွဲမည်။
ကမ္ဘာ့ ဆည်များကော်မရှင် (World Commission on Dams) ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးတွင် ဆည်များ ဆောက်လုပ်မှု ကြောင့် လူဦးရေ သန်း (၄၀) မှ (၈၀) အထိ နေရပ်ရင်းစွန့်ခွါ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြရမှုကြောင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှာ အထူးနစ်နာ ခံစားခဲ့ကြရပါသည်။ ကော်မရှင်၏ဖော်ပြချက်အရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချကြရမှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ နေထိုင်မှုဘ၀များ ပြောင်းရွှေ့ကြရသောကြောင့် “မြေယာမဲ့များ ဖြစ်ရခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့များ ဖြစ်ရခြင်း၊ အိမ်ခြေယာမဲ့များ ဖြစ်ရခြင်း၊ ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရခြင်း၊ စားရေရိက္ခာ မဖူလုံဖြစ်ရခြင်း၊ သေနှုန်းမြင့်များခြင်းနှင့် လူအများပိုင် ရင်းမြစ်များ ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ လူမှုရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်သောသတ္တိများ ဆုံးရှုံးရခြင်း” တို့ကိုလည်း ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားသော လူနေမှုစနစ် ပြိုကွဲရခြင်းနှင့်အတူ စီးပွားရေးအရ စွမ်းအားများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းတို့ကြောင့် “များသောအားဖြင့် ပြန်လည် ပြုပြင်၍ မရနိုင်တော့လောက်အောင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ဆင်းရဲနိမ့်ကျရခြင်းများ” ကို လည်း ဖြစ်စေပါသည်။
မစီးဆင်းပဲနေသော ရေသေကြောင့် ရှစ်ဆိုစတိုမီယေးဆစ် (Schistosomiasis) ခေါ် ကပ်ပါးသံကောင်များ ပိုပေါက်ဖွားနိုင် ခြင်း၊ ပြဒါးဓါတ်စုပုံလာ၍ ပြဒါးဆိပ်သင့်ခြင်း စသည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများလည်း ရှိနေပါသည်။ ငါးမျိုးစိတ်အချို့ မြစ်ညာ တက်၍ သားမပေါက်နိုင်တော့သောကြောင့် ပျောက်ကွယ်သွားမည်။ လူအများ ပြောင်းရွှေ့အခြေချရမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများလည်း ပိုဆိုးလာဖွယ် ရှိနေပါသည်။
မြစ်အောက်ပိုင်းရှိ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးခင်းများ၊ နုံးတင်ကျွန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တံငါလုပ်ငန်း၊ ခရီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု သောက်သုံးရေကိစ္စများတွင်လည်း ထိခိုက်မှု အကြီးအကျယ် ရှိလာစေတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ အပေါ်မှ မြစ်ရေဆုတ်ယုတ် အားလျှော့လာသောကြောင့် ပင်လယ်ရေငံ အထက်တက်လာကာ မြေများ ဆားငံဓါတ်ပေါက်ခြင်းလည်း ကြုံကြရပါဦးမည်။
ထို့အပြင် ဆည်ကျိုးပေါက်မှုများ အတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိနေပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၌ပင် ၀ါရှောင်ဆည်၊ ကြိမ်ခရမ် ဆည်များ ရေလျှံကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီး လူအများအသက်အိုးအိမ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ဤသတင်းများကို စစ်အစိုးရက အမှောင်ချ ထားခဲ့ပါသည်။
လူထုကို အသိပေးတိုင်ပင်မှု မရှိခြင်း
ပိုဆိုးသည်မှာ ဤသို့ဆိုးကျိုးများ ခံစားရဖွယ်ရှိသည့် လူထုအများကို အသိပေးအကြောင်းကြားမှု မရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရ ရှိသမျှ ထုတ်ရောင်းစားနေပြီး၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကလည်း ဘာရရ အမြတ်ထုတ်ဖို့သာ ချောင်းနေကြပါသည်။ လူထုအများက မစားရ ၀မခန်း “သတင်းစာကိုင်လျှင်ပင် ဓါတ်လိုက်ရမည့်” ကြွားလုံးများနှင့်သာ ကြုံနေကြရပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ရာတွင်လည်း ပါဝင်ခွင့်မရှိ။ ဤစီမံချက်များကလည်း လေ့လာနိုင်ခွင့်လည်း မရှိ။ ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ကြုံရ စေမည့် အခြေအနေဖြစ်နေလျှင်သော်မှ ကြိုတင်သိထားခွင့် မရှိကြပါ။ အခြားအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများတွင် ဆည်တည်ဆောက် ရေးကိစ္စများနှင့် လူထုအများက ဆူညံစွာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်နေကြသော်လည်း၊ မြန်မာပြည်သူများက မေတ္တာသုတ် ပင် ကျယ်ကျယ် မရွတ်ဝံ့သည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေပါသည်။
သံလွင်မြစ်ကို ဆည်တည်သည့်ကိစ္စကို ထောက်ခံလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ သံလွင်နှင့် ဧရာဝတီယှဉ်လျှင် သံလွင်စီးဆင်းရာ တလျှောက်တွင် တောတောင်ပိုများပြီး၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သဖွယ် လွင်ပြင်က အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်က တော့ ဤသို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ကို ဖြတ်စီး၍ သွေးကြောကြီးသဖွယ် ဖြစ်နေသော မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုးကျိုးများက ပိုများမည်မှာ ပြောဖွယ် မရှိပါ။ ဆင်ခြင်ကြည့်လျှင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဤကိစ္စအတွက် အစီရင်ခံစာပြုစု ထုတ်ပြန်ခဲ့သော KDNG ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ဆိုပါရစေ။ သတင်းမီဒီယာများ အနေဖြင့်လည်း ထိခိုက်နစ်နာရမည့် တန်ဖိုးကို အလေးအနက်ထား၍ ၀ိုင်းဝန်းတားဆီးကြပါရန် မီးသံချောင်းလှန့်လိုက် ရပါသည်။
(ဆည်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို KDNG အစီရင်ခံစာမှ ရယူပါသည်။)
Posted by ရွက်မွန် at 12:09 PM
Thank you very much for this post. May I also refer to Blogger Ko Mg Yin's သံလွင်(သို့ )စင်္ကြာဝဠာရဲ့ အမွေ about Than Lwin River.